Saciid iyo Naciima oo loo doortay Sanatoorada Soomaliland 2021ka | Dayniile.com
Home Warkii Saciid iyo Naciima oo loo doortay Sanatoorada Soomaliland 2021ka
Waxaa saakay teendhada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho dib uga bilaabatay doorashada Senatarada Aqalka Sare ku matalaya gobolada Waqooyi ee Somaliland, waxaana maanta qorshuhu yahay in la doorto shanta Senator ee ka haray xubnaha Somaliland leedahay.
Kursigii ugu horeeyay oo saakay doorashadiisa ka dhacday teendhada Afisiyooni waxaa ku guuleestay Senator Siciid Cabdi Xasan oo loogu codeeyay qaab gacan taag ah kadib markii uu u tanaasulay musharaxii la tartamayay Jaamac Cabdillaahi.
Senatorkan goordhaw guuleestay ayaa horey uga mid ahaa Xildhibaanada Aqalka Sare ee waqtigoodu dhamaaday, waxa uuna mar kale nasiib u yeeshay in dib loo doorti afar sano kale uu kasii mid ahaan doono Aqalka Sare .
Waxaa sidoo kale goordhaw loo doortay Senator katirsan Aqalka Sare Naciima Xasan Xaaji Maxamuud oo heshay 30-cod halka Muno Cumar Xasan oo kursigaan horay ugu fadhisay ay heshay 13 Cod.
Afarta kursi kale ee maanta doorashooda dhaceyso ayaa labo kamid ah waxaa ku tartami doona dumar, waxaana la filayaa in maanta lasoo gaba gabeeyo doorashada Aqalka Sare ee gobolada Waqooyi .
Previous articleGuddoomiya Ciro oo sheegay waqtiga ay bilaaban doonaan doorashada golaha shacabka
Next articleDagaal kooban oo dhex maray ciidamada Ahlu-Sunna iyo kuwa Galmudug
Howlgallo militari oo ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa Xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa la sheegay in...